Autotarget yakasarudzika yekufungidzira analytic tekinoroji inoita basa rakaomarara revashambadzi nekungoerekana vaenzanisira ruzivo rwavanenge vatora nezve vatengi? hunhu munzira dzese. Uye, nyowani neshanduro yavo yazvino, Autotarget inoshanda nechero email mupi webasa (ESP).
Autotarget inotungamirwa neiyo miviri data hova: kutanga, email tinya kuburikidza uye tinya maonero maitiro uye, chechipiri, muchinjiko-chiteshi nzira yekutenga maitiro. Autotarget otomatiki uye inoramba ichitsvaga email kudzvanya uye kuona maitiro ehunhu zvakananga kubva kune yekambani yazvino email sevhisi.
Intuitively, vatengi vane akakwirira eRFM maseru maitiro vari kuita zvakanyanya neiyo mhando, uye vangangoita kudaira kune kupihwa uye vanoda yakaderera, shoma kana, pamwe, pasina madhora. iPost's Autotarget RFM girafu inoratidza chaizvo vatengi vangani paRMM cell chaiyo yakapindura (iyo yakadzvanywa, kutariswa, uye kutengwa) kune chero seti yetsamba dzakasarudzwa. Wakashongedzerwa neiyi data, vatengesi vanogona kukurumidza uye nyore kugadzira zvikamu zvevatengi zvinoenderana neRFM yavo yekupindura maseru kuitira inoshanda yekutevera-kushambadzira.